मन लागेको कुरा सिक्न कहिले पनि बुढो भईदैन! - Blogs of Sagar Prasai
मन लागेको कुरा सिक्न कहिले पनि बुढो भईदैन!
म सानो हुँदा मेरो जन्मदिनमा मलाई मामाले सानो किबोर्ड उपहार दिनुभयो। मलाई त्यो बाजा बजाउने रहर थियो र बजाउन चाहि आउँदैन थियो। टिभिमा गायकहरूको पछाडी बसेर मान्छेहरूले ठुला ठुला किबोर्ड बजाएको देख्दा, मलाई पनि म पछि गएर यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो।
म किबोर्ड सिक्न भनेर मेरो स्कुल नजिकैको एउटा म्युजिक सेन्टरमा भर्ना भएँ। त्यहाँ अनुशासन कडा थियो। गुरुलाई भेट्ने बित्तिकै दुई हात जोडेर नमस्कार गर्नुपर्ने। गुरुले कडा स्वर पारेर भन्थे-"संगीतलाई खेलाची नगर केटाकेटी हो। संगित भनेको साधना हो।" म त गुरुलाई हेरेर नै दंग पर्थेँ। यिनले मलाई किवोर्ड बजाउन जान्ने बनाउँनेछन् भनेर मख्क पर्थे।
तर किबोर्ड सिक्न गएको गएको म, गुरुले त हार्मोनियम सिक्ने ग्रुपमा पो राखे। मैले म त किबोर्ड सिक्न आ'को भन्दा, गुरुले भने- "यी दुवै बाजा एउटै खाले हुन्। यो सिक्यौ भने किबोर्ड बजाउन आईहाल्छ।" अब त्यसता महान् गुरुले भनेको कुरा, होला नै भन्ने ठानेर म हार्मोनियम सिक्न थालेँ।
हार्मोनियम सिक्न निकै कठिन रहेछ। बजाउनु सँग सुर लगाएर गाउनु पर्ने। सुर अलिकति तल माथी भयो कि गुरुको गाली खाईहालिने। मलाई गित गाउने रहर नै थिएन, म गाउन पनि सक्दिन थिए। तर पनि किबोर्ड बादक बन्ने रहरले मेहेनत गरे।
केहि दिन सम्म सामन्य ज्ञान दिए पछाडी गुरुले त राग र ताल पो पढाउन थाले। मैले हिम्मत गरेर- यो किबोर्ड कै पाठ हो त भनेर सोधेको थिए। बदलामा गुरुको साफ गाली खाएँ। त्यसपछि कहिले सोधिन।
मलाई अहिले सम्म याद छ, गुरुले राग "भुपाली" पढाए अनि तालमा "दादरा" ताल पढाए र भने भोलि हामी यहि तालमा आधरीत एउटा गित प्राक्टिस गर्ने। गुरुको यो कुराले म खुसी, भोलि त गित बजाउन पाउने भईयो भनेर। तर मेरो खुसी क्षणिक रहेछ।
भोलि पल्ट गुरुले, नारायण गोपालको "बिरही माया अधुरो रह्यो, बिर्सनु कसोरी" भन्ने गित पो बजाउँदै गाउन लाए। त्यो पनि तबलाको धा, धि, ना, धा, तु, ना सँग मिलाउँदै। मैले त केहि गरी सकिन। सक्नु पनि कसरी, गित गाउने मेरो रहरनै थिएन। रहर भएको भए पनि पार लाग्दैन थियो- स्बर पनि थिएन। यसरी दुई तीन कक्षा सम्म म त्यहि गितमा, त्यहि तालमा अड्किए, गुरू पनि बेस्सरी कड्किए। त्यसको भोलिपल्ट देखी म संगित सिक्न जानै छोडे। मनमनै नारायण गोपाल सँग माफी पनि मागेँ।
त्यहि हार्मोनियम सिक्दा सिकेको सुर लगाउँदै एउटा हातले अलि अलि किबोर्ड बजाउन आउँथ्यो। त्यसरी नै तानतुन गितहरू बजाउँथे। तर मलाई सधैँभरी मनमा राम्ररी किबोर्ड सिक्न नसकेको कुरा खट्किरहन्थ्यो।
हरेक बर्ष- किबोर्ड सिकेर राम्रो गरी बजाउने ईच्छा मेरो मनमा यति विशाल बन्दै गयो कि यो बर्ष मैले त्यसो नगरी रहन सकिन। जन्मदिनमा श्रिमतिले किबोर्ड उपहार दिईन र म एकजना किबोर्ड बादकलाई गुरू थापेर घरमै किबोर्ड सिक्न थाले।
आफुलाई मन लागेको कुरा सिक्न र गर्न कहिले पनि बुढो भईदैन भनेर पहिला कतै पढेको थिएँ- अहिले आफैलाई लागु भईरहेको छ। आज स्वर सम्राट नारायण गोपालको पुण्य तिथीमा यो सम्झना बाँड्न मन लाग्यो।